အမျိုးသမီးများအတွက်ပျော့ပျောင်းသောကလေးငယ်မြွေဒီဇိုင်း PU သားရေကြိုးပခုံးလွယ်အိတ်များကို - အခမဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်အကောက်ခွန်သက်သာစွာဝယ်ပါ။ | WoopShop®
ပျော့ပျောင်းသောမြွေကလေးဒီဇိုင်း PU သားရေကြိုးပခုံးလွယ်အိတ်
$20.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $57.99
အရောင် Black က အနီရောငျ ညိုသော
25x10x15cm / အနက်ရောင် 25x10x15cm / အနီရောင် 25x10x15cm / အညိုရောင်
ပျော့ပျောင်းသောမြွေကလေးငယ်ဒီဇိုင်း PU သားရေကြိုးပခုံးလွယ်အိတ် - အမျိုးသမီးများအတွက် 25x10x15cm / အနက်ရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
pattern အမျိုးအစား: မြွေ
အရွယ်အစား (L * H * W): 25 * 10 * 15cm
အမျိုးသမီးအိတ်များ မြွေဒီဇိုင်နာအမှတ်တံဆိပ်အိတ်များ, Crossbody Bag အိတ်များ၊ ကွင်းဆက်သိုင်းကြိုး Messenger Bags, PU သားရေပခုံးလွယ်အိတ်
လှပသောအိတ်၊ အနက်ရောင်သည်နေရောင်အောက်ရောင်ပြန်ဟပ်နေသောလိမ္မော်ရောင်နှင့်တူသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးအဲဒါကိုလုပ်ပေးပါ၊ သင်နောင်တမရပါ။
vيدةاطببتهشلطيطliمهوصناعتهطيدةمنالطرازالرفيع livraison rapide
сумочкасупер! каквописании! ရက်သတ္တပတ်2ရရှိခဲ့သည်။ вакуумныйпакет Оченьпонравилась !!!
ဖော်ပြချက်တစ်ခုနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ခမ်းနားထည်ဝါစွာ ... je suis très satisfaite de mon Achat ..merci vendeur ။
Простаядермантиноваясумочка။ Держитформу, жесткая။